Ganacsatada yar yar ee Boosaaso oo ka cabanaya Canshuur kordhin la sameeyay. – SBC
Ganacsatada yar yar ee Boosaaso oo ka cabanaya Canshuur kordhin la sameeyay.
Posted by Webmaster on Maarso 29, 2012 Comments
Waxaa maalmahan cabasho muujinayay ganacsatadaa yar yar ee kusugan magaladada Boosaaso ee xaruunta gobolka Bari oo ka cabanayaan lacago canshuur kordhin ah oo gaaraysa 5000 shilin iyadoo markii hore laga qaadi jiray 3000 shilin Somali ah canshuurtaas oo ay ku soo kordhisay dawlada hoose ee degmada Boosaaso.
Dadkan ayaa sheegay in aysan awoodin lacagtaas oo ay ku sheegeen in ay badan tahay ayasana ka soo galin goobta ay ku ganacsadaan oo mararka qaarkood ay ku tilmaameen in aanba waxba laga gadan .
Sidoo kale waxa ay u sheegeen Koox ka tirsan SBC oo Saaka Booqatay in canshuur kordhintaan ay ku soo beegmayso xilli hantidoodii ay gubatay eyanna awoodiin in ay bixiiyaan lacagtaas cashuurta iyagoo ku tilmaamay in ay haysan boosas oo ay cad ceed fadhiistaan cidna ay wax uqaban iyagoo mararka qaarkoodna ay heliin waxa ay koob shaax ku gataaan sida Hadalka u dhigeene.
Xildhibaan Fowsiyo Yusuf Guursade oo ah madaxa canshuuraha iyo dakhliga golaha deegaanka Boosaaso ayaa iyadoo ku hadlaysa afka golaha shacabka ay ugu baaqday shacabka in ay bixiyaan canshuurta oo ay tilmaantay in shacabka ay dib ugu noqonayso canshuurtana ay wax badan uqabato shacabka soomaaliyeed iyadoo tilmaamtay in aamaanka lagu sugo sidoo kalena lagu fuliyo howlaha nadaafada,
Ugu danbeyntii cabashadan ayaa timid xili ganacsatadad ayar yar ay horay ugu cabaneyeen sarifka aan fadhiyiin iyo Caqabado ugaga yimid Gubashadii Suuq Weyn ee Boosaaso halkaas oo badi ay ugaga gubteen ganacsatadaas hantidii ay heysteen.